महोत्तरीको मटिहानी पुगेर स्वास्थ्य जाँच गर्दै डा. गोविन्द केसी « Bagmati Online
महोत्तरीको स्वास्थ्य चौकी मटिहानी पुगेर डा. गोविन्द केसीले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जाँच सुरु गरेका छन्। उनले बुधबारदेखि हाड जोर्नी सम्बन्धी रोगहरूको स्वास्थ्य जाँच सुरु गरेका हुन्।
जोर्नी रोगबाट ग्रसित दीर्घ रोगीलाई नि:शुल्क उपचार सुरु गरिएको उनका सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी गिरेन्द्र झाले बताए। उनलाई मटिहानीमा मटिहानी नगरपालिका प्रमुख हरि प्रसाद मण्डलसहित स्थानीयले स्वागत गरेका थिए। ग्रामीण जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले आफू मटिहानी आएको डा. केसीले बताए। उनले बुधबार ८० जनाको स्वास्थ्य जाँच गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपाल मगर संघ गण्डकी प्रदेशको सम्मेलनमा पोखरा पुगेका देउवाले आन्दोलन गर्न कांग्रेससँग पैसा नभएको बताएपछि अहिले उनी आलोचनाको शिकार बनेका छन् ।
देउवाले आन्दोअलाका लागि पैसा चाहिने भनेपछि अहिलेसम्म कांग्रेसले गरेका ठुला आन्दोलन पनि पैसाकै बलमा गरिएको अर्थ लागेको छ । त्यतिमात्र होइन पैसा नभए देशमा कसैले आन्दोलन गर्न नसक्ने अर्थ समेत उनको अभिव्यक्तिले लागेको चर्चा भैरहेको छ । उनले पोखरामा आन्दोलन गर्न आफूसँग पैसा नभएकाले अदालतको आदेश कुरिरहेको बताएका थिए ।
सभापति देउवाले भनेका छन्, ‘हामीसँग पैसा पनि छैन । जबरजस्ती आन्दोलनमा बोलाउन पनि सक्दैनौं, ‘क्रियाशील लिने बेलामा मारामार हुन्छ, भोलि आन्दोलनमा क्रियाशील मात्र आऊ न भन्यो भने कोही आउँदैनन् ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले छुट्टै बहस सुरू हुने पक्का छ । सँगै उनीपनि आलोचनाको केन्द्रमा आउने निश्चित भएको छ । कतिपय सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले उनको आलोचना सुरू गरिसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश नै अहिलेको समस्या समाधानको निकास हुने भन्दै देउवाले भने, ‘हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई ध्रुवीकरणमा लगे, संसद् पुन:स्थापनाको पक्ष/विपक्षमा बाँडिनु गलत हो, यसको निकास अदालतले दिन्छ।’ उनले अदालतबाट आउने फैसला स्वीकार गर्ने र संसद् पुन:स्थापना भए सदनमा र नभए चुनावमा जाने बताएका छन् । आक्रोशित देखिएका देउवाले विवादमा आउनेगरी दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले कांग्रेस पार्टीभित्रै तरङ्ग देखिएको छ ।